I-American Water Spaniel - Yini Ongayilindela Kulenja Yezinja - Izinhlobo
I-American Water Spaniel (noma i-AWS, ngamafuphi) ingenye yezinhlobo ezimbalwa kuphela ezakhiwe eMelika. Amarekhodi athembekile we-AWS abuyela emuva ku-1865. Yize indawo okuyiyona evele kuyo le nja iphikisana, kukholelwa kakhulu ukuthi yaqala ukuvela ezigodini zeWolf neFox River eWisconsin, futhi ekuqaleni yayaziwa ngokuthi yiBrown Water Spaniel noma I-American Brown Water Spaniel. Kusolwa ukuthi i-Curly Coated Retriever ne-Irish Water Spaniel babephakathi kokhokho bayo, futhi mhlawumbe ne-Field Spaniel, noma i-Old English Water Spaniel engasekho.
Abazingeli bezimakethe eceleni komgwaqo iMississippi kanye nemingenela yayo esenyakatho kuthiwa basebenzise kakhulu lolu hlobo. Laba bantu babedinga inja yesibhamu eguquguqukayo eyayizosebenza kahle ezindaweni zombili zasemanzini nasezinkangala. Ijazi eliminyene, elisontekile lasiza ukuvikela inja emanzini abandayo nokujezisa isimo sezulu esivamile e-Upper Midwest, futhi kwavikela nezibungu ezisehlathini.
I- “Jump-shooting” —indlela yokuzingela lapho isibhamu sigeleza khona sifike emanzini amancane, sithuse futhi sidubule amadada, bese sithumela inja yaso ukuyolanda — sasenziwa kabanzi nasemifuleni eminingi “nasemigodini” enamachashazi izindawo ezisenyakatho yeMinnesota naseWisconsin. I-AWS izibophezele kulo mkhuba, njengoba usayizi wayo omncane nejazi lawo onsundu konke bekuvumela ukuthi kuhlangane namahlamvu ekwindla ngenkathi umzingeli enza indlela yakhe yokuthula. Uthando lwenja lwamanzi luphinde lwenza kwaba intandokazi phakathi kwalabo ababethanda izingcucu ze-mink ne-muskrat.
Ngokwethulwa kwezinhlobo ezinkulu zeBritish retriever endaweni yokuzingela yaseMelika, ispaniel esincane esinsundu sathandeka. UDokotela uFJ Pfeifer waseNew London, eWisconsin, unikezwe udumo ngokusiza ekusindiseni lolu hlobo. Izindlwana zikaPfiefer zaziphethe izinja ezifika ku-132, futhi wathengisa imidlwane engaba yikhulu minyaka yonke kubazingeli abasekude njengeTexas. Wanikeza izinja isiqinisekiso esingenamibandela, kodwa wathi akekho umthengi owake wasizakala ngalesi sipho.
UPfiefer waphinde wasungula iklabhu yokuzalanisa futhi wasiza ukwakha indinganiso ebhalwe phansi, eyavula indlela yokwamukelwa yi-United Kennel Club ngo-1920, i-Field Stud Book ngo-1938, kanye ne-American Kennel Club ngo-1940. Inja kaPfiefer uqobo, 'uCurly Pfiefer' , kwaba ngowokuqala ukubhaliswa kwe-American Water Spaniel.
I-American Water Spaniel Namuhla
Ngaphandle kwemizamo yokuqala kaDkt. Pfiefer nabanye abaningi abathandayo, i-AWS ayikaze iphinde ibuye ukuthandwa kwayo kwangaphambi kweMpi Yezwe II. Ihlala iyindalo engajwayelekile enezinkulungwane ezingaba ngu-3 000 kuphela ezikhona nganoma yisiphi isikhathi. Amakhulu ambalwa kuphela abhaliswa minyaka yonke.
Zonke izinhlobo zivela kolayini abambalwa abasele - mhlawumbe njengezimbalwa njengezintathu. I-AWS cishe ayaziwa ngaphandle kwaseNyakatho Melika. Ngisho nase-United States, izinja nabafuyi zihlala zigxile kakhulu esifundeni seGreat Lakes. I-AWS yaqokwa njengenja yombuso esemthethweni yaseWisconsin ngo-1986.
I-AWS ayikaze ithandwe kakhulu eringini lombukiso njengezihlobo zayo eziningi zezemidlalo. Ngenxa yalokhu, akubanga khona ukuhlukana okubonakalayo ekubukekeni kwensimu kuqhathaniswa nemigqa yebhentshi, futhi uhlobo lonke selugcinile amakhono alo okuzingela. I-AWS idlula ababuyisi abaningi njenge-upland flusher, esebenza ngokusezingeni eliphakathi nendawo nangaphakathi kwebanga lezibhamu. Inja inekhala eliqinile le- 'spaniel' namakhono amahle wokuhogela. Abazingeli banamuhla basebenzisa inja ukuthola nokuthola izinhlobo ezahlukahlukene zemidlalo yasenyakatho, kufaka phakathi ama-pheasants, i-grouse ekhukhumezekile, i-grouse ene-sharptailed, amajuba alilayo, i-woodcock, ngisho nezingwejeje, ama-hares, nonogwaja.
Kepha kuyindima yayo njengomuntu onekhono, olingana nomnotho, obuyisa amanzi abandayo okusize lolu hlobo ukuthola indawo ethambile ezinhliziyweni zezinhlanzi zasemanzini zanamuhla. I-AWS ingazingelwa kalula esikebheni noma esikebheni ngaphandle kokuphazamisa isikebhe. Yize incane, inja iyaqina futhi iyakwazi ukubuyisa izinyoni ezinkulu njengamahansi aseCanada. Lokhu kuqina, kuhlangene nemvelo yayo evikelayo ekhaya, kuzitholele idumela lokuba 'yi-Chesapeake phakathi kwama-spaniel'.
Ingubo yayo evikela insimbi iyenza ifaneleke kakhulu ezimweni zamanzi abandayo kunanoma isiphi esinye isipani. NgoJuni 1992, i-AWS yaba ngowokuqala wohlobo lwayo lokuwina isihloko sokuzingela ngeNorth American Hunting Retriever Association.
Ukuhlukahluka kohlobo kubonakala ezinhlobonhlobo zemisebenzi lapho abanikazi be-AWS nezinja zabo babamba iqhaza khona. NgoDisemba 1993, i-AWS yaba ngeyokuqala ngohlobo lwayo lokuwina isicoco sobuqhawe be-flyball i-FDCH eNorth American Flyball Association. Okunye ukubamba iqhaza kwe-AWS emisebenzini ehlukahlukene kubandakanya imincintiswano yokulalela, ukusesha nokutakula, ngisho neSchutzhund. Eminyakeni yakamuva, kube nentshisekelo eyengeziwe ku-AWS njengenja yokubonisa.
I-American Water Spaniel yinja elingene ngobukhulu enomsila omude ngokulingene. Isilinganiso se-AWS singama-17 ″ ubude futhi sinesisindo esingama-38 lbs. Ijazi elinsundu lisukela kwesibindi kuya kushokholethi omnyama, futhi lisongwe kakhulu njenge-Retriever's Coated-coated, noma ngephethini evulekile, engahambisi eyaziwa ngokuthi 'marcel'.
I-AWS ihlakaniphile, iyaqeqeshwa, futhi ithembekile enkosini yayo. Imane imnene ngezilwane nezingane, futhi yenza isilwane somndeni esifanelekile. Inja inobungane nabantu ongabazi abethuliwe kahle. Kwenza i-watchdog enhle kakhulu, ukuxwayisa ngabanikazi ngemisindo engajwayelekile egcekeni. Ubukhulu bayo obuncane benza ukuthi ifaneleke ezindaweni zokuhlala ezincane ezinjengezindlu zasemadolobheni ngisho namafulethi. Kepha njengezinhlobo eziningi zemidlalo, ifanelwe inani elifanele lokuzivocavoca kanye nenhlalo yabantu ukuze ilungiswe kahle.
I-AWS ayizimisele ukujabulisa njengezinye izinhlobo ze-spaniel. Kuvame ukuba yinja yomuntu oyedwa. Ikhula kancane futhi ibhoboza kalula. Iyazwela ngokomzwelo futhi ingahle ibe namahloni noma iqale “ukuluma” uma iphathwa ngokhahlo olungadingekile. Inja inokuthambekela kokukhonkotha, kepha lokhu kungakhungatheka ngokuqeqeshwa okufanele. Ama- “yodel” amaningi e-AWS lapho ejabule. Abanye badinga ukuqeqeshwa okuqhubekayo ukuze banciphise ukuthambekela kwabo kwemvelo kokuhlafuna, ukumba nokugxuma. Abambalwa banendawo futhi banolaka ngezinja eziyinqaba.
I-AWS kufanele ithole ukuqeqeshwa okusemthethweni kokulalela. Ngoba ijwayele ukuba yinja yomuntu oyedwa, imvamisa ayiphenduli kahle ekuqeqeshweni kobungcweti ngaphandle kokuthi kwenziwa ubudlelwano obuningi zisencane. Inja ithambekele kakhulu kubantu futhi kufanele ikhuliswe ekhaya. Ubumnene benja, ukuvama kokuvuthwa, nokubekezelela ubuhlungu obukhulu kungenza izindlela ezithile zokuqeqesha ezinamandla zingasebenzi; amafushane, nsuku zonke, izikhathi zokuqeqesha eziqhubekayo ziyindlela engcono kakhulu yokuveza amandla we-AWS. Ukuqeqeshwa kwekreyithi kunconywa kakhulu.
Akuwona yini ama-Water Spaniels lezo zinja ezinkulu, ezinezinwele ezisontekile ezinemisila efana namagundane?
I-AWS kwesinye isikhathi ididaniswa ne-Irish Water Spaniel — uhlobo olufanayo, olungajwayelekile olunomphetho osontekile ekhanda, ubukhulu obukhulu, nomsila omncane, 'wegundane'.
Kungani banemisila emide? Ngabe imisila ye-spaniel ayivamisile ukudokiswa?
Umsila omude uyingxenye yezinga lokuzala. Kuthiwa isebenza njengephini lokuqondisa emanzini ageleza ngokushesha.
Ngakho-ke, ingabe angama-spaniel — noma ayabuyisa?
Lona kanye lo mbuzo uhlukanise abathandi be-AWS baba ngamaqembu emibono ehlukahlukene.
Ukuze uncintisane ezivivinyweni nasezilingweni zokuzingela ezivunyelwe i-AKC, i-AWS kufanele ibekwe njenge-spaniel noma i-retriever. I-AKC ibheka iklabhu yabazali bohlobo (kulokhu, i-American Water Spaniel Club of America) ukwenza isinqumo sokuhlukanisa. Ifisa ukukhombisa ukuguquguquka kohlobo emxholweni kanye nasensimini, i-AWSC yake yacela ukuhlukaniswa okubili. Ukuhlukaniswa okunjalo bekuyovula ibhokisi le-pandora le-AKC — ngokungangabazeki okuholele ekutheni amanye amakilabhu okufuya afune isimo esifanayo sezinja zawo. I-AKC yasichitha isicelo. Iklabhu yabazali ekugcineni ikhethe ukugcina uhlobo lungahlukaniswa.
Elinye iqembu labathandi be-AWS — iAmerican Water Spaniel Field Association (AWSFA, http://www.awsfa.org, noma info@awsfa.org) - lasungulwa ngonyaka we-1993, futhi likhuthaza ngentshiseko ukuthanda kwabo ukuhlukaniswa kwe-spaniel.
Uma yenza indlu enhle kangaka kanye nomngane wokuzingela, kungani ingajwayelekile?
Abaningi banomuzwa wokuthi i-AWS ayiyinhle kangako njenge-English Springer Spaniel, futhi ayinayo ikhala eliqinile le-Springer nodeshi oludlamkileyo. Inja ngokuvamile ayibizi kakhulu njengeLabrador futhi ingaba nenkinga enkulu yokuphatha i-surf enolaka, izinyoni ezinkulu zamanzi, ukubuyisa okude, njll. Ijazi layo lingaba uzibuthe we-burrs, futhi lidinga ukunakekelwa okuningi okuvela kumzingeli we-upland kunabanye wezinhlobo ezigcwele kakhulu.
Ukuntuleka kokuhlukaniswa kwe-AKC kungadlala indima ekutholakaleni kwenja — ukuzala ngokuqinisekile akulona ithemba le-trialer yasensimini ethandekayo. Lokhu kushoda kokuchayeka, kugcina i-AWS ngaphandle kwamehlo abathandayo bezemidlalo nabesifazane abaningi. Zimbalwa izinja ezivela emincintiswaneni yebhentshi ye-AKC, evimbela amathuba kubanikazi bezilwane nabathandi bemidlalo yezinja ukuba babe ngumndeni ne-AWS.
Ngabe zikhona ezinye izivivinyo zokuzingela noma izilingo zokubonisa amathalente ohlobo?
I-AWS iyafaneleka ukuncintisana emicimbini ye-United Kennel Club, iNorth American Hunting Retriever Association, kanye nokuhlolwa okwenziwe yiklabhu yabazali ne-AWSFA. Xhumana nezinhlangano ezifanele ukuthola imininingwane ngezivivinyo noma izinsuku zokuhlolwa.
Ukuntuleka kokuthandwa (ngakho-ke, ukuntuleka kokuzalela ngokungakhethi) kusize i-AWS ukubalekela izifo eziningi zofuzo ezihlupha ezinye izinhlobo. Abanye abanikazi besikhathi eside bathi izinja zabo azikaze zidinge ukunakekelwa kwezilwane ukugula. Uhlu lwezinye izifo ezaziwayo kanye nokuphazamiseka kuvela ngezansi.
Njengabanye ababuyiselayo, i-AWS inejazi elikabili eliyivikelayo kuzulu. Ijazi langaphakathi lihle futhi lisebenza njengesihlanganisi. Ibhantshi langaphandle limahhadlahhadla, lixosha amanzi futhi livikela inja ezigangeni ezisenyakatho. Leli jazi lichithwa entwasahlobo, kodwa liphuma kalula ngokuxubha okulingene.
Ingabe amajazi abo asontekile adinga ukuzilungisa okuningi?
Ijazi elimaphakathi le-AWS empeleni lingamamitha ayi-1/2 ubude ubude kunaleyo yeLabrador Retriever. Okufushane, kanye ngeviki ukuxubha kwanele ukukugcina kusesimweni esifanele. Abanye abanikazi ngezikhathi ezithile izinja zabo zigundiwe ukuze zizigcine zingabukeki zizinhle kakhulu. Ukugeza njalo kunconywa kulezo zinja ezibhukuda njalo, ukuze zilawule iphunga 'lezinja ezimanzi'. Abanye abazingeli / abaqeqeshi bensimu bagcina izinja zabo zifinyeziwe phakathi nenkathi ukuze ibhantshi lingacoshi ama-burrs amaningi. Abanye futhi bagcoba uwoyela engutsheni ngaphambi kokuya emgodini ukuze kube lula ukususwa kwe-burr.
Uhlobo lolo luvame ukuba nomnene lapho lunikezwa inani elifanele lokuzivocavoca umzimba njalo.
Izinja eziningi zinobungane, yize zingaziwa ngokunyakazisa umsila njengabanye babazala bazo ababuyayo. Kwesinye isikhathi umuntu angathola i-AWS ecasulayo noma engacasukile, kepha lokhu akuyona into ephathelene nohlobo. I-AWS temperant ngokuvamile iwela ndawana thize phakathi kwe-English Springer Spaniel ethokozisayo kanye ne-Irish Water Spaniel ezimele ngokwengeziwe.
Izinkinga Zempilo Nezokwelapha
Emashumini amaningi eminyaka, i-AWS 'ibipakishwe' emapulazini aseMidwestern, futhi bevame ukushiywa ukuze bazondle. Lokhu kuholele ezingeni elithile lokukhethwa kwemvelo lapho kwasinda kuphela abanamandla kakhulu. Ngisho nanamuhla, i-AWS isalokhu iwuhlobo oluphilile ngokumangalisayo kuze kufike ezinjeni.
Noma kunjalo, abathengi be-puppy abasebenzayo kufanele babhekane nalabo kuphela abakhiqizi abathola imvume ye-CERF kanye nokuhlolwa kwe-OFA noma kwe-PennHip hip esitokisini sabo sokuzalela. Yize izigameko zeProgressive Retinal Atrophy neHip Dysplasia phakathi kwe-AWS kukholakala ukuthi ziphansi uma ziqhathaniswa nezinhlobo ezifanayo, zombili lezifo ziyadabukisa emvelweni. I-OFA, iPennHip, noma ukuvunyelwa kwe-CERF kubazali bomdlwane wakho akuqinisekisi ukuthi umdlwane wakho ngeke uzuze ifa lezifo, kepha ukuhlolwa okunjalo njengamanje kuyindlela engcono kakhulu etholakalayo yokwehlisa izehlakalo zalezi zifo enanini labantu jikelele.
Uhlu olulandelayo lwezifo nokuphazamiseka kutholakale ngocwaningo lwabafuyi besizwe be-AWS. Ezinye zalezi zimo zivamile phakathi kwazo zonke izinhlobo zezinja (isb.Izinto ezingezwani neze-allergies noma i-hypothyroidism). Ezinye ngokusobala zenzeka KAKHULU kaningi (isb. I-hermaphroditism). Futhi ezinye, njenge-alopecia (ukulahleka kwezinwele), azenzi buthakathaka noma zisongele impilo.
I-Hip Dysplasia (HD)
I-Progressive Retinal Atrophy (PRA)
Kungani i-Golden Retriever yakho ichithwa nokuthi ungabhekana kanjani nayo
akhona ama-bulldogs amafrench amancane
ungakwazi ukondla ikhabe lenja yakho
I-english cream i-golden retriever imidlwane izindleko
zihlala isikhathi esingakanani izinkunzi ezibomvu zasemgodini
kubiza malini ukuxabana